မင်းအတွက်​ဆို​ကောင်းကင်​ကိုသိမ်းပိုက်​မယ့်​သူ - Misandar Myint - Wattpad
Ongoing, First published Jul 08, 2021
ကျိုးကျစ်​ဟန်​ ဆိုတဲ့၂၆နှစ်​အရွယ်​​ သရုပ်​​ဆောင်​မင်းသားတစ်​​ယောက်​ဟာ gay တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး လက်​ထပ်​ထားတဲ့ ​ယောက်​ကျားရဲ့ ကွာရှင်းခြင်းခံလိုက်​ရတယ်​ ။ သူဟာ အချစ်​ကို ​ကြောက်​ရွံ့ သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်တာ​ကြောင့်​
​ယောက်​ကျားဖြစ်​သူဟာ ​နောက်​ထပ်​​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ကြိုက်​လိုက်​တယ်​ ။သူ့ ရဲ့ အ​ကြောင်းပြချက်က သူ့ ကို အ​လေးမထားတာ​ကြောင့်​တဲ့.....။ မထင်​မှတ်​ပဲ ​ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်​ကို ပြန်​​ရောက်​သွားတဲ့ အခါမှာသူ့ ရဲ့ မမြင်​ဖူးတဲ့အ​ဖေ ဆိုတဲ့ လူကရုတ်​ရက်​​ပေါ်လာခဲ့ ပြီး
အမ တစ်​​ယောက်​ပါ အဆစ်​ပါလာ​သေးတယ်​
ဒါ​လေးက မမီ စိတ်​ကူးထားတာ​လေးပါ။
ကြိုက်​ကြမယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါတယ်​ ။
Get notified when မင်းအတွက်​ဆို​ကောင်းကင်​ကိုသိမ်းပိုက်​မယ့်​သူ is updated
8 partsLast updated Sep 19, 2021
||Lost Love|| (矢恋 )
Warning:This is notatranslation!!! Characters and plot are all mine. It's my Own Creation. ယီကှမျ...
ဝတ်ထုထဲဝငျလညျ အခဈြရှာမယျ ! [BL Novel Transl...
တုကျယ့်​က web novel ​တွေကို ဖတ်​ရတာ ကြိုက်​ပြီး အခုတ​လောမှာ သူ သ​ဘောကျ​နေတဲ့ ဝတ္ထုကို ​ရေးတဲ့ author...
I just wanna save you!!Please have mercy on...
ပိုငျခငျြးယှီတဈယောကျ သူဘယျတော့မှထပျမဖတျခငျြတဲ့ ဝတ်ထုထဲကိုကူးပွောငျးလာခဲ့တယျ Gong : မငျးက ငါ့အခဈြဥ...
ထီးနနျးမလုအောငျ ခှေးရူးကို ယဥျပါးစပေါသျောလညျး
translation crd cover photo,I took this from pinterest Fake name
🚫Not normanl novel🚫 Type:web novel Genre: Comedy,Romance,Yaoi language: Chinese Author: 绿野千鹤 Year...
Novel - The prince's Loyal lover Type-web novel Author-Jué Jué Eng Translator-Bc Novels Status In C...
လူသားမြိုးနှယျစှမျးအားရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ တရနျဟာ အိပျနရေငျးနဲ့ ကြောကျခတျေကို ဝိညာဉျကူးပွောငျးသှားခဲ...
Warning:This is notatranslation!!! Characters and plot are all mine. It's my Own Creation. ယီကှမျးသညျ ထိုစဥျက အလှနျငယျရှယျခဲ့သညျ။ သူသညျ မစဥျးစားပဲ အမွဲတစေ လီတိုငျးပွညျမှ ရနျခငျြးဝမျကိုသာ အလိုရှိခဲ...